Egwuregwu kachasị mma maka PC | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | 30/12/2020 10:00 | Emelitere ka 30/12/2020 16:37 | General, Videogames
Ọ bụrụ na ụdị ọ bụla dị iche na PC ọzọ, nke ahụ bụ Shotters (egwuregwu ịgba egbe). Ọ bụ n'elu ikpo okwu a ebe egwuregwu ndị a na-ejikarị eme ihe, na-enwe nnukwu katalọgụ ha niile, ma na onye mbụ na onye nke atọ. Anyị nwekwara ike ịchọta egwuregwu asọmpi, ebe akụkụ ntanetị na-enweta ibu, ọtụtụ n'ime egwuregwu ahụ dị n'ịntanetị bụ ihe anyị nwere ike ịhụ na Esports. Egwuregwu na igodo na igwu egwu na-enye ọtụtụ ohere maka imeziwanye ya, ebe ị na-achọkarị ịmegharị mgbe ị na-agagharị.
N'ime egwuregwu ịgba égbè, anyị na-ahụ ndị dị adị na ọnọdụ mkpọsa, ebe anyị na-esonyere akụkọ a na-akọ nke ọma, ndị asọmpi nke egwuregwu egwuregwu, ebe nkwado na ndị enyi anyị dị mkpa iji merie, ma ọ bụ agha royale, ebe ịchọta otu kachasị mma na map na-enyere anyị aka imeri egwuregwu ahụ, ma naanị ma ndị ọzọ. N'isiokwu a anyị ga-egosi gị egwuregwu kacha mma maka PC.
1 Oku nke Ọrụ: WarZone
2 KWEE Ebighi Ebi
4 Okirikiri ọkụ n'isi: The Master Chief Collection
5 Egwurugwu Six: nnọchigide-n'agha
6 Ụdị Legends
8 Ọkara Ndụ: Alyx
Oku nke Ọrụ: WarZone
Enweghị ike ịfu na elu ọ bụla, Kpọọ Ọrụ ejirila ike ịmepụta egwuregwu na-enweghị atụ na-emeziwanye ihe a hụrụ na Blackout na Oku nke Ọrụ Black Ops 4. A nnukwu map dabere na nke oge a Warfare 2 map na nnukwu ebe ebe ndị egwuregwu 150 na-achụ ibe ha ruo mgbe ikpeazụ na-eguzo. Egwuregwu ahụ nwere ọtụtụ usoro, n'etiti nke anyị nwere ike igwu n'otu n'otu, duos, trios ma ọ bụ quartets, na-eme otu ndị enyi na ndị enyi anyị site na ịntanetị. Egwuregwu ahụ na-enyekwa anyị ụfọdụ egwuregwu egwuregwu na-emecha dị ka ihe omume, dị ka Halloween ma ọ bụ Christmas.
Egwuregwu a nwere egwuregwu na-egwu egwu, yabụ ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ ya, anyị ga-abanye n'ọgụ na nyiwe niile nke aha ya dị, ndị a bụ PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Usoro X / S.. Ọ bụrụ na anyị achọghị ịgafe egwuregwu ahụ iji dozie ọnụ ọgụgụ, anyị nwere ike kwụsị ya n'oge ọ bụla. Ihe kachasị mma na aha a bụ na ọ bụ n'efu, na-enye ịkwụ ụgwọ n'ime ngwa maka ịzụta ngwa agha ma ọ bụ akpụkpọ anụ. Ihe dị mkpa bụ na ịkwụ ụgwọ ndị a anaghị enye uru ọ bụla, anyị nwekwara ike ịzụta ngafe agha maka € 10.
KWEE Ebighi Ebi
Ntughari uzo nke ihe ngbanwe nke saga nke eweputara na 2016 mepụtara site na ID Software, ebe o na-acho inye uzo kacha mma, oke iwe na oku. Egwuregwu ahụ pụtara maka otu akụkụ ya nke na-enye anyị ọgụ dị egwu megide ihe ndị e kere eke site na ifo ebe ihe kachasị pụta bụ etu ha si nwee obi ọjọọ, n'ihi Gore ha na-enye. Na DOOM Ebighị Ebi, onye ọkpụkpọ ahụ na-arụ ọrụ nke ogbu mmadụ (DOOM Slayer) na anyị laghachiri ịbọ ọbọ megide ndị mmụọ nke hel.
Egwuregwu ahụ pụtakwara maka ụda ụda na-enweghị atụ na ngalaba a na-ahụ anya nke na-ewepụ hiccups n'agbanyeghị ikpo okwu ebe anyị na-egwu ya, mana na PC ọ bụ ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya na ịma mma ya niile, na-eji usoro dị oke elu na 144Hz ihe nlere.
Nweta ebighi ebi na Amazon na-enye na njikọ a.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ ghọwo ezi ihe, egwuregwu nke ụmụaka na ndị okenye na-egwu. Ọ bụ Agha Royale ebe ndị otu ma ọ bụ ọkpụkpọ nke ikpeazụ na-emeri. Anyị ga-enyocha nnukwu map ya n'ịchọ akụrụngwa iji lụso ndị na-ama ya ọgụ. Dị ka WarZone, ọ nwere crossover play ya mere ma PC na njikwa egwuregwu ga-egwu egwu ma ọ bụrụ na ha ahọrọ.
Fortnite pụtara na ndị ọzọ nke Battle Royale maka aesthetics ya na-akpali akpali na echiche nke onye nke atọ ya, ọ nwekwara usoro ihe owuwu nke na-enye ọtụtụ ihe dị iche iche na egwuregwu egwuregwu. Ọ bụrụ n'ị na-achọ egwuregwu egwuregwu ị ga-egwu na ụlọ ọrụ, yana ịmachaghị mma, ọ bụ nnukwu nhọrọ. Egwuregwu ahụ bụ n'efu, ọ nwere ihe ịzụrụ n'ime ngwa ahụ site na ego mebere na anyị ga-enwetara na mbụ. Anyị nwekwara ike inweta njem agha iji nweta mgbakwunye dabere na ịkpọ ya.
Okirikiri ọkụ n'isi: The Master Chief Collection
Nna-ukwu Chief bụ akara ngosi Xbox ma dị maka ndị egwuregwu PC niile, ohere igwu egwu saga Halo niile. Ihe ngwugwu nke gunyere Halo: agha agha, Halo 2, Halo 3 na Halo 4. Ha niile nwere mkpebi ka mma na arụmọrụ ka mma, egwuregwu nwere otu ụdị ọkpụkpọ miri emi, iji nwee ọ toụ otu sagas kachasị mma nke Microsoft naanị mepụtara.
Na mgbakwunye, Microsoft etinyela ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke sava raara onwe ya nye maka ọtụtụ mmadụ, egwuregwu ahụ nwere egwuregwu obe n'etiti Xbox na PC, yabụ na agaghị enwe ndị egwuregwu maka egwuregwu gị. Na a mbụ onye n'ọnọdụ na ụfọdụ ọbịa iro ga-etinye anyị megide ụdọ na a nnọọ fun gameplay.
Nweta Halo: Nnukwu Nchịkọta Nna-ukwu na ọnụahịa kachasị mma na Steam site na nke a njikọ
Egwurugwu Six: nnọchigide-n'agha
Egwuregwu ọzọ nke na-apụ apụ maka asọmpi ya, ọ bụ akụkụ kachasị ọhụrụ nke ama ama nke Tom Clancy's Rainbow Six saga, nke gụnyere otu ọkpụkpọ, nkwekọrịta na ụdị egwuregwu 5 v 5. Dabere na ọgụ n'etiti ndị uwe ojii na ndị eyi ọha egwu, ebe Ndị na-eyi ọha egwu na-edozi usoro, ndị uwe ojii ga-eji ụzọ dị iche iche wakporo ha gbuo ha. Egwuregwu ahụ nwere klas iri atọ nke mba ndị kewara, onye ọ bụla n'ime ha bụ ọkachamara na ụdị ngwa ọgụ ma ọ bụ nka.
R6 nwere otu n'ime obodo PC kachasị ike, na-elekwasị anya ịdị arọ ya kachasị na ntanetị yana Esports. Kemgbe ọ malitere na 2015, egwuregwu ahụ akwụsịbeghị ịnweta mmelite na oge n'efu na-enye ya ndụ na-enweghị ngwụcha, na mgbakwunye na-ebelata ụfọdụ chinchi na-ebili ma ọ bụ nbata nke ndị aghụghọ. Egwuregwu a nwere ọnụahịa mara mma ugbu a, enwere ike igwu naanị ya mana ọ na-atụ aro ka gị na ndị enyi kpọọ ya.
Nweta egwurugwu isii: nnọchibido na ọnụahịa kachasị mma na Steam site na nke a njikọ
Ọ gaghị efu na ndepụta a, site n'aka ndị okike nke Titanfall, Respawn Entertainment ewepụtala ihe kachasị mma nke Titanfall saga, ọ bụ ezie na ọ jụrụ aha ya, ọ naghị eme ya na mmụọ nke aha na a Obi ojoo egwuregwu. Egwuregwu ahụ nwere nnukwu map ebe anyị na-eche ọtụtụ ndị egwuregwu ma ọ bụ ìgwè aka ịlụ ọgụ ebe onye ọ bụla bụ onye ikpeazụ ga-emeri, dịka ọ bụla n'agha royale.
Anyị na-egosipụta ụdị agwa ya dị iche iche, nke anyị nwere ikike pụrụ iche, dịka robot nwere nko nke ọ ga - enyere aka iru ọkwa dị elu. ma ọ bụ agwa nwere ike iji oke ọsọ ma ọ bụ mepụta ikpo okwu na-awụlikwa elu nke ga-ebuga anyị na nsọtụ ọzọ nke maapụ ahụ. All esonyere a dịgasị iche iche nke ngwá agha nke anyị nwere ike tinye ingame ngwa, ya mere, ọ bụrụ na anyị na-enweta a egbe na-enweghị ngwa, anyị nwere ike tinye ha ka anyị na-enweta ha ma ọ bụ were ha si ala iro. Egwuregwu bụ free na na-ngwa ịkwụ ụgwọ.
Nweta Akụkọ Ochie na Steam site na nke a njikọ
Nke ikpeazụ nke Metro saga, dabere na ụwa post-apocalyptic ebe nnukwu anụ na-achị n'okporo ámá, egwuregwu ahụ na-akọ akụkọ banyere Artyom, onye bụ isi nke egwuregwu ndị gara aga, na njem ya siri ike ịmalite ndụ ọhụụ na ọwụwa anyanwụ nke Russia oyi. Egwuregwu ahụ na-egosipụta ihu igwe na-agbanwe agbanwe site na iji abalị na ehihie na nnukwu map nke na-ezo ọtụtụ ihe nzuzo na oge na-eyi egwu.
Ọpụpụ nwere mmepe mepere emepe na-agbanwe agbanwe yana ụwa na-agbanwe agbanwe ebe nyocha na ikpokọta ihe onwunwe dị oke mkpa dị ka ọgụ megide anụ ọhịa. O nweghi otutu mmadu, ihe dị ịtụnanya ịhụ na egwuregwu onye mbụ na-agba egbe, mana enwere ekele na ị gaghị echefu na ịgbapụ onye mbụ nwere ike iburu nkata n'azụ. Soundda egwuregwu ahụ na-enyere aka ịmikpu onwe gị na mbara igwe ya.
Nweta egwuregwu na ọnụahịa kachasị mma na nke a Njikọ Steam.
Ọkara Ndụ: Alyx
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị kwuru banyere otu ihe ịtụnanya nke 2020, ọ bụ nkeji ikpeazụ nke Ọkara Ndụ. No, ọ bụghị na-atụ anya Ọkara Life 3, Alyx bụ ihe ọhụrụ egwuregwu na-eme ka ojiji nke mebere eziokwu ibuga anyị Half Life eluigwe na ala ụzọ kachasị mma. Ihe omume nke ọmarịcha akụkọ ihe mere eme ya na-etinye anyị n'etiti egwuregwu mbụ na nke abụọ nke saga ma tinye anyị na akpụkpọ ụkwụ nke Alyx Vance. Onye iro na-esikwu ike, ebe nguzogide ahụ na-akpọrọ ndị agha ọhụrụ ịlụ ya.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ egwuregwu kachasị mma kachasị mma ruo taa, anyị ga-anụrịrị ya ụtọ maka akụkọ ya na maka egwuregwu ya, oge ya dị egwu n'agbanyeghị ịbụ egwuregwu VR, nke na-abụkarị mmehie nke obere oge. Ntọala ya bụ ihe onye ọ bụla na-akwado usoro a ga-atụ anya ya, yana ikuku dị egwu na ntọala nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla anyị hụrụ. Ndị obodo na-arụsi ọrụ ike iji mepụta mods ma gbasaa egwuregwu ahụ. Obi abụọ adịghị ya na egwuregwu ahụ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị achọ na PC, yabụ na anyị ga-achọ ngwa ọrụ ọgbara ọhụrụ, yana iko dakọtara.
Nweta Ọkara Ndụ: Alyx na ọnụahịa kachasị mma na nke a Njikọ Steam.
Ọ bụrụ na ị bụghị onye na-agba ụta, na nke ọzọ anyị na-akwado gị ịkwọ ụgbọala egwuregwu, anyị na-enye gị nkwanye na egwuregwu lanarị.
Ọ bụrụ na ịnweghị PC ị nwere ike ilele isiokwu a ebe anyị na-akwado egwuregwu maka PS4 ma ọ bụ nke ọzọ ebe a anyị na-akwado egwuregwu mkpanaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Egwuregwu kacha mma maka PC